Ogaden News Agency (ONA) – OYSU UK oo ku dhawaaqay Ruwayad 2013 laqabanayo
OYSU UK oo ku dhawaaqay Ruwayad 2013 laqabanayo
Posted by ONA Admin	/ August 3, 2013
Ururka Dhalinyarada OYSU UK ayaa isugu yimid magaalada London, Halkaas oo OYSU London ay ku qabanayeen munaasabad loogu magacdaray OYSU Iftar UK.
Kulankan OYSU Iftar UK ayaa waxaa kasoo qeybgalay dhamaanba Xubnaha ururka OYSU ee Jaaliyada London, OYSU Birmingham iyo xubno kale oo kamid ah OYSU UK. Waxaana munaasabadan sharafta badan oo aheyd Afur ay ururka OYSU isugu yimaadeen laguna soo bandhigay mashruucyada ururku uu qaban doono 6da bilood ee so socota iyada oo lagu qiimeyay waxqabadkii 6 biloodlaha ahaa. Munaasbadan Afurka OYSU UK waxaa kale oo kamid ahaa Wacdiyo Diini ah iyo Siminaaro dhanka maamulka ah oo halkaas lagusoo bandhigay.
Mudane Xasen Jaja oo kamid ahaa xubnihii kasoo qeybgalay munaasabadan ayaa u sheegay wakaalada wararka Ogadeniya in Barnaamijkan lagusoo bandhigay waxqabadka Ururka OYSU in si gooni ah hadana loo eegay waxyaalaha ururka u yaala ee uu qaban doono 6 bilood ee soo socata.
Hadaba Ururka ayaa qorsayaashiisa waxaakamid ah 6 bilood ee sosocata Ruwaayad aad uga weyn ruwaayadihii horey loogu qabtay wadanka UK. Ruwaayadan oo kagadisan dhinacyo badan marka laga fiiriyo qaabki ruwayadihii hore loo sameeyay haday tahay sheekada ruwayada iyo hadey tahay qaabka jiliada intaba.
Khubaradi kasoo qeybgashay kulankan waxaa kamid ahaa Abwaanka weyn Maxamuud Cumar Jaango oo talooyin badan ka bixiyay qaabka ugu haboon ee ruwayadan loo farsameyn doono. Ururuka ayaa dhowaan soo bandhigi doona xayaysiinta Ruwaayada oo howsheedi si toos ah loo gudagalay.
Barnaamijka kale ee ururka OYSU ka shaqeynayo ee laga dooday waxaa kamid ah, Barnaamij Qaxoontiga Ogadeniya ku saabsan oo Bisha September lagu qaban doono magaalada London. Barnaamijkaas oo isna ah barnaamij qadiyada shacabka Somalida Ogadneiya gaar ahaan qaxootiga Ogadeniya wax tar badan leh.
Xoghayaha OYSU Birmingham ayaa Wakaalada Wararka Ogadeniya fariin hambalyo iyo bogaadin ugusoo gudbiyay Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadeniya iyo dhamaan Jaaliyadaha Ogadeniya isaga oo ku amaanay dadaalka iyo kartida wanaagsan ee shacabka Ogadneiya. Xoghayaha Ayaa sheegay in Barnaamijka la isugu yimid lagu guuleystay islamarkaasna qorshaha Ruwaayada oo magaaloyinka waaweyn ee wadanka UK lagu wareejin doona iyo meelo kale oo caalamka kamid ahba uu ahaa qorshe sidii loogu talo galay loo fulin doono inshallaah.
Kulanka Ururka OYSU UK ayaa ahaa mid lagu guuleysatay islamarkaasna waxaa sii socon doona howlfulintii barnaanijyada,
Xoghaye Mustafe Diirane ayaa sheegay in qorshihii maamulku soo diyaariyay lagu guuleystay islamarkaasna xeerkii Guud ee OYSU lagu soo ansixiyay San Diego Sanadkan si buuxda ururku u meel mariyay. Mustafe ayaa ugu baaqay dhalinyarada Ogadeniya ee wadanka UK inay feejignaadaan islamarkaasna qadiyadooda u istaagaan kana soo qeyb galaan dadaalada ururka dhalinta OYSU UK uu kawado wadanka UK.
waan salaamayaa cidkasta oo waxtar uhaysa halganka ogaden laakiin waxaa dhab ah in aan heeso iyo shirarar aan waxtarkoodu gaadhayn gudaha ogadeniya ayna waxba tarayn haba yaraatee sidaas awgeed waxaan baaq udiriyaa dhamaan dhalinyarada reer ogaden waxaan idin leeyahay marka koowaad hagaajiya dhaqankiina iyo muuqaalkiina marka labaad waxaad ogaataan umadii dhalinyaro wanaagsan leh way badbaadaa hor umarna waygaadhaa laakiin wakhti badan ha iskaga luminina wax danbi mooyee aydaan khayr ka helayn sida heesaha iyo wixii lamida sidaas awgeed waxbarta si aad wax ugu qabataan dadkiina